Tag: hagaajinta warbaahinta bulshada | Martech Zone
Tag: habaynta warbaahinta bulshada
Talaado, Febraayo 3, 2015 Arbacada, Juun 24, 2020 Douglas Karr
Qeyb sii kordheysa oo ka mid ah dadaalada suuq geynta ee aan u geynay shirkadaha waxaa ka mid ah istiraatiijiyado warbaahinta bulshada oo lacag leh iyo kuwa dabiiciga ah. Marwalba waan kufaxaa wararka sii socoshada ee ah in baraha bulshada aysan dib ugu laabanayn maalgashiga ay shirkadaha kale ka helayaan. Daacadnimo dhan, waxaan u maleynayaa inay ugu wacan tahay fulin la’aan iyo istiraatiijiyad wanaagsan, ee aan ahayn dhexdhexaadinta. Waxaan sii wadeynaa inaan aragno kobaca suuqgeynta bulshada waxayna si aan caadi aheyn waxtar ugu yeelatay
Teknoolojiyaddu waxay sii wadaa inay fursado aan caadi ahayn siiso ganacsatada yaryar. Maaddaama awoodda xisaabinta iyo aaladaha ay sii socdaan horumarka, kharashyada ayaa sii wadaya inay hoos ugu dhacaan guddiga. Dhowr sano ka hor, qalabka wax lagu raadiyo iyo barnaamijyada bulshada ayaa kumanaan kun oo doolar ah bil kasta waxaana heli kara oo keliya shirkadaha awooda inay maalgashadaan. Berri waxaan la hadli doonaa koox xirfadlayaal ganacsi oo yaryar ah oo ku saabsan aaladaha caawiya iyaga iyo UpCity waa mid ka mid ah aaladaha